Bahamas, obi nke njem nlegharị anya na -eme ememme ụbọchị njem ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Bahamas, obi nke njem nlegharị anya na -eme ememme ụbọchị njem ụwa
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ndi akuko • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye osote onye isi ala, Honorable I. Chester Cooper, onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu.
Onye Bahamas Minister of Tourism, Investments & Aviation, Deputy Prime Minister, The Honorable I. Chester Cooper na -eme emume ncheta afọ iri anọ na otu nke World Tourism Day,
Agwaetiti nke Bahamas na -esonye na United Nations World Tourism Organisation na Caribbean Tourism Organisation n'ịghọta mmetụta mmekọrịta ọha na eze na mmetụta akụ na ụba nwere na imerime mmadụ gburugburu ụwa.
"N'afọ a, a họpụtara ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa ka ọ bụrụ ụbọchị a ga -elekwasị anya na uto na -esite na njem nlegharị anya, nke dị oke egwu," onye osote onye isi ala Honorable I. Chester Cooper, Bahamas Minister of Tourism, Investments & Aviation kwuru.
“Dị ka ọtụtụ ebe ndị Caribbean, njem nlegharị anya bụ nkụda obi nke Bahamas na dịka anyị na -ekwu, ọ bụ ọrụ onye ọ bụla.
Ụsọ mmiri anyị dị egwu, na mmiri doro anya nke ukwuu ị nwere ike ịhụ ya na mbara igwe, mana nke ahụ abụghị ihe na -akọwa anyị.
Kama, ọ bụ mmadụ ọ bụla na -akpụzi ahụmịhe Bahamas ma guzosie ike irite uru na ọganiru njem. Ekpebisiri m ike ịmepụta ọrụ na ohere maka ndị Bahamia niile na inyere nnukwu mba anyị aka ịgwọ ọrịa. ”
Ka mmachibido njem njem mba ofesi na-amalite ibelata, nke mmụba nke ịnweta ọgwụ mgbochi kpaliri, Bahamas nọ n'ọnọdụ dị mma maka ịga n'ihu na-agbake. Mmụba nke ụgbọ elu emebere atụmatụ yana nlọghachi ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na -enye aka na mmụba dị mma na ọnụọgụ ndị ọbịa, na -eduga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 500,000 n'ime ọnwa isii mbụ nke afọ.
Onye osote onye isi ala kwuru, "Ọ bụ ezie na anyị echewo ọgụ dị elu ihu n'oge ndị a na -enwetụbeghị ụdị ya, anyị ga -anọrịrị na -ele anya ma nwee nchekwube ka ụwa na -amalite imepe ọzọ."
“M na -esonyere ndị isi na Caribbean niile iji bulie mkpa nke nsonye mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nkwado ya, yana ebe ndị mara mma na azụmaahịa. Mba anyị mara mma, na mpaghara Caribbean anyị hụrụ n'anya, ga -eme nke ọma ọzọ wee gaa n'ihu na -aga n'ihu, dịka n'okwu motto nke Bahamas: Gaa n'ihu, gaa n'ihu, gaa n'ihu, ọnụ. ”
Nyochaa agwaetiti niile nwere inye www.bahamas.com